Umjelo wamanzi kunye nogutyulo lombhobho wecandelo lezinto ezifakwayo - China Umjelo wamanzi kunye nogutyulo lombhobho woluhlu abavelisi, abaxhasi
Ibhanti yensimbi iqinise i-polyethylene (i-HDPE) yombhobho odibeneyo woluhlobo luhlobo lombhobho wodonga olune-HDPE kunye nensimbi ye-tape fusion edibeneyo. Isakhiwo sodonga senziwe ngamanqanaba amathathu: umaleko wangaphakathi ludonga oluqinileyo oluqhubekayo lombhobho wangaphakathi kunye nombhobho wangaphakathi unenxeba kwaye uhlanganiswe ngaphandle. Ibhanti yentsimbi isongelwe kwi-U-emile yarhoqo ukuqiniswa kwesinyithi yensimbi yokuqinisa, kunye nokuqiniswa kwesinyithi esinyanzelekileyo esidityanisiweyo sidityaniswa nomaleko ongaphandle weHDPE njenge ...
HDPE jiko lwesakhiwo uhlobo udonga B umbhobho ikwabizwa ngokuba iHDPE isakhiwo jiko udonga umbhobho, carat ityhubhu, iHDPE uhlobo jiko umbhobho, uxinano oluphezulu polyethylene jiko umbhobho, uhlobo B ulwakhiwo lombhobho udonga. Luhlobo olutsha lombhobho obhetyebhetye nobunzima bokukhanya, amandla aphezulu, udonga lwangaphakathi olugudileyo, ukuxhathisa umhlwa, ukuxhathisa ukwaluphala, ukunxiba ukuxhathisa, uxinzelelo lwefuthe, ukumelana nefuthe, ubhetyebhetye obulungileyo, impilo kunye nokhuseleko. Umgangatho we-weld uphezulu, umzimba uqhagamshelwe, i-qua ...
Umbhobho okhethekileyo oveliswe kwizinto ezixineneyo ze-polyethylene enezindonga zangaphakathi ezigudileyo, udonga lwangaphandle olunamazantsi, kunye neendawo ezinomngxuma phakathi kweendonga zangaphakathi nezangaphandle zisetyenziselwa ikakhulu ukungcwatywa komhlaba kunye neenkqubo zokuhambisa amanzi. Ngexesha lokuvelisa. Udonga lombhobho omaleko kabini luqinile. Isebenzisa uxhulumaniso oluguquguqukayo namatywina erabha endalo, ekulula ukuwafaka, axhumeke ngokukhuselekileyo, akukho lula ukuvuza, kwaye unokuqonda okuphantsi ...
Impahla ekrwada yokuveliswa kwale mveliso iguqulwe ngezinto ze-PP: udonga lwangaphakathi olugudileyo kunye nodonga lwangaphandle lubonisa ukujikeleza okungafaniyo, kwaye udonga lwangaphakathi nolwangaphandle alunanto. Ukuxhathisa ngemichiza kunye nokumelana nokumelana: Ukuchasana nokubola kwemithombo eyahlukeneyo yemichiza enje ngeasidi, ialkali, ityuwa, njl.njl. Yona yinto ebalaseleyo yokulwa umhlwa, kwaye ayizukubekwa umhlwa zizinto ezibolayo emhlabeni. Ukuxhathisa kwempembelelo: Udonga lombhobho lwenza ulwakhiwo olwahlukileyo, ...